Generator spark plug R5B12-77C match for GI3-1, GI3-5 / FB77WPCC replace 243-4291, China Generator spark plug R5B12-77C match for GI3-1, GI3-5 / FB77WPCC replace 243-4291 Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - TAKUMI AUTO CHIKAMU
Jenareta spark plug R5B12-77C mutambo weGI3-1, GI3-5 / FB77WPCC kutsiva 243-4291
G3600 dzakateedzana jenareta spark plug mutambo we243-4291 Cummins Q19G
Wartsila Generator Spark Plug, Nickel Yakaiswa Mhangura Spark plugs 77 Heat Range
Spark plugs mechi ye243-4291 yeDenso GI3-1 Mhare FB77WPC Cummins Q19G
Ngura Ramba Kaviri Iridium Spark plugs Champion FB77WPCC Natural Gasi Injini
Generator Spark plugs Nickel Copper neIridium spark plug mechi yeDenso GI3-1 Champion RB77WPC
Nyorera Izvo: Guascor Wartsila Cummins Waukesha Fit For: 243-4291 Mhare FB77WPCC Denso GI3-5
Electode: J Type Thread: M18x1.5
Hex: 7/8 "(22.2mm) Tsvaga: 20.6mm (13/16 ”)
Kupisa Range: 77 Mudzivisi: Ehe
Gap: 0.3mm Electrode Material: Iridium
Kubvunda Kukura M18x1.5
Svika 20.6mm (13/16 ”)
Hex 7/8 "(22.2mm)
Kupisa Range 77
Electrode Rudzi "J" Gap maindasitiri emagetsi
Center Electrode Material Nickel Mhangura neIridium
Ground Electrode Chinyorwa Nickel neIridium
Zvakanakira iyo Ordinary spark plugs:
1. ISO yakajairwa wiring terminal post: yakasanganiswa nekuvhara patembiricha yakakwira, chaiyo corrosion resistance uye stamping resistance, kuve nechokwadi chekubatana kwakavimbika nehigh voltage wire, isingaparadze conduction yesimba remagetsi;
2. High density insulating ceramic, uchishandisa yakakwirira content alumina kuumbwa, Ultra-yakanaka poda formula, isostatic pressing molding process, kuti ive nechokwadi chekuvharira uye mechanical zvivakwa munzvimbo yakanyanyisa;
3. Otomatiki simbi shell kugadzira maitiro uye yakakwirira nickel plating reshiyo, kuti ive nechokwadi torsion kuramba uye corrosion kuramba;
4. Labyrinth ndangariro yekunze sealing gasket kuve nechokwadi chekuisa chisimbiso kugona uye kugadzika kuchinjika kwevhavha yecylinder;
5. Kushandisa Laser welding tekinoroji kuve nechokwadi kusimba kwesimbi dzinokosha; yakanyanya kutetepa ignition electrode, iginition simba rinowedzera kunyura, kuderedza voltage inodiwa pakubatidza, tanga nekukurumidza, mhanyisa nekukurumidza, idling kumhanya yakagadzikana, uye mafuta anodhura zvakanyanya.